Cumar Filish oo ka hadlay Xiisadda ka taagan Kaaraan | KEYDMEDIA ONLINE
Cumar Filish oo ka hadlay Xiisadda ka taagan Kaaraan
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir Cumar Filish ayaa ka hadlay xiisaddii iyo shaqaaqadii ka dhacday Degmada Kaaraan, taasoo weli taagan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyaha gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish ayaa booqday degmada Kaaraan waxa uuna halkaas kula hadlay mas'uuliyiinta degmada iyo qaar kamida bulshada qeybaheeda kala duwan, waxa uuna guddoomiye Filish si gaara uga hadlay xiisaddii ka taagneyd toddoobaadkan degmada Kaaraan.
Cumar Filish, guddoomiyaha Gobolka Benaadir ayaa ula hadlay dadkii fadhiyay goobta qaab uu ku muujinayo in ay awood leeyihiin ciidamada daacadda u ah maamulka Famaajo, isla markaana ay ku dur-durin karaan cid kasta oo isku dayda in ay hor istaagto, wuxuuna si dadban farriin ugu diray kooxihii hubeysnaa ee ku kacsanaa nidaamka Farmaajo islamarkaana taageerayay shacabkii careysnaa ee bannaan-baxa dhigayay.
“Dowladdu awood ayay leedahay balse diyaar uma ahan intay idinka idin jiirto inay u tagto, wiilashiina dambiyada sameynaya nooga hormara oo la hadla wiilashiinana, celiya si looga baaqsado dhibaato dalka ka dhacda” ayuu ku yiri dadkii uu la hadlayay guddomiye Filish.
Waxa uu door biday intii awood lagu xallin lahaa xiisadda ka taagan Kaaraan in odayaasha daqanka iyo wax garadka ay xalliyaan, waana tillaabo ku habbooneed in ay mar hore qaataan.